अबको 2-3 वर्षमा सिक्किम विश्वविद्यालय याङगाङमा सर्ने आशा - खबरम्यागजिन
Homeखबरअबको 2-3 वर्षमा सिक्किम विश्वविद्यालय याङगाङमा सर्ने आशा
गान्तोक, 09 मई । आगामी 2-3 वर्षमा सिक्किम केन्द्रिय विश्वविद्यालय दक्षिण सिक्किमको याङगाङमा स्थानान्तरण गर्न सकिने स्थितिमा पुग्ने आशा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रो. अभिनाश खरेले व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, विश्वविद्यालयको निर्माण कार्य यति तारिक समाप्त हुन्छ भनेर किटान भने गर्न नसकिने पनि उनले बताए। हालमा विश्वविद्यालयको निर्माण कार्य प्रथम चरणमा चलिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिॅंदै उपकुलपति प्रो. खरेले उक्त जानकारी दिए।
निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाईबारे प्रश्न गर्दा उनले सिक्किम एक पहाड़ी राज्य भएकाले यहॉं निर्माण कार्य सहज नरहेको बताए। पहाड़ी राज्य भएकाले निर्माण कार्यको निम्ति सरसामग्रीहरू पुऱ्याउन धेरै गारो अथवा समय लाग्ने हुँदा पनि निर्माण कार्यमा ढिलाई भइरहेको उनले बताए। यसैगरि, यहॉंको मौसम पनि एउटा ढिलाईको कारण रहेको उनले बताए। यस अतिरिक्त छिमेकी राज्यमा समय—समयमा चल्ने गरेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका कारण पनि निर्माण कार्य बाधित बन्ने गरेको उनले बताए।
विश्वविद्यालयको भूमि अधिग्रहणबारे प्रश्न राख्दा रेजिस्ट्रार टीके कौलले विश्वविद्यालय निर्माणको निम्ति आवश्यक भूमि राज्य सरकारले अधिग्रहण गरेर विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिए। उनले राज्य सरकारद्वारा विश्वविद्यालयलाई जम्मा 300 ऐकर जमीन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो भने अब 36 ऐकर जमीन हस्तान्तरण गर्नु बांकी रहेको बताए। तर, यस कारण निर्माण कार्यमा भने कुनै प्रकारको वाधा उत्पन्न नभएको उनले स्पष्ट पारे। रहल 36 ऐकर जमीन हस्तान्तरणको निम्त पनि प्रक्रिया चलिरहेको उनले थप जानकारी दिए। आगामी 11 मईको दिन हुने ‘राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी दिवस’ कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपकूलपति खरेसित गरिएको बातचीतमा उनले यो जानकारी दिएका हुन्।